UNGAYENZA NJANI MHLOPHE IMILENZE YAKHO NGOKWASEKHAYA - PAMPEREDPEOPLENY.COM - UBUHLE
Ungayenza njani mhlophe imilenze yakho ngokwasekhaya
Ekhaya Ubuhle Ukunyamekelwa komzimba Ukhathalelo lomzimba oi-Riddhi Roy Ngu Riddhi ngoNovemba 21, 2018
anushka sharma ae dil hai mushkil jonga
Ulusu lomzimba wakho alufumani ngqwalaselo ingako kunesikhumba sobuso bakho, kwaye loo nto yenza ulusu emzimbeni lube mnyama. Apha, siza kukuxelela indlela yokwenza mhlophe imilenze yakho ekhaya.
Ngokumhlophe, asithethi ukutshintsha umbala kwaye asikhuthazi ubulungisa njengombala olungileyo wesikhumba ngokunjalo. Sithetha nje, ukubuyisela ulusu lwakho kwitoni yalo yendalo.
Izinto ezininzi ezinjengokonakaliswa lilanga, ungcoliseko kunye nokoma kunokwenza ulusu lwakho lubonakale lumnyama kunokuba kunjalo. Siza kwabelana ngeendlela ezinokunceda ukwenza ulusu lwakho lubonakale ngathi aluzange lonakaliswe ukuqala ngalo.
Akukho sidingo sokukhathazeka, kuba wonke umntu uhamba ngale nto, kwaye inkathalo encinci yiyo yonke into oyifunayo ukuze ususe ubumnyama kwaye ubuyisele ulusu lwakho kumbala owawunjalo ngaphambili, ngakumbi emilenzeni.
Wonke umntu utsalwa kancinci, kwaye kulungile. Kuyenzeka nokuba usebenzisa i-sunscreen eninzi. Ke, qhubeka ufunda ukuze ufumane iindlela onokuthi uzenze mhlophe ngayo imilenze yakho ekhaya ngoncedo lonyango lwasekhaya lwemilenze emhlophe.
1. I-Oats: Xuba i-oats engumgubo ngamanzi kwaye uyihlikihle ngesantya setyhula lonke ulusu lwakho. Oku kuyakunceda ukulahla iiseli zolusu olufileyo kwaye wenze ulusu lwakho lube mhlophe.
2. I-Turmeric: I-Turmeric sesinye sezithako ezinokunceda ukwenza ulusu lwakho lube mhlophe kwaye luyinike ukonyusa okungaphezulu kokukhanya. Sebenzisa i-turmeric kwifom yokuncamathisela kwaye uqhubeke uyikhuhla kulusu lwakho ukuze ufike kwitoni yayo yoqobo yendalo.
3. I-yogurt: I-yogurt ibonelela ukufuma kulusu kwaye, kwangaxeshanye, iyanceda ukulahla iiseli zolusu ezifileyo ngaphandle kokuba ngqwabalala.
4. Isinamoni: Isinamoni ineempawu zokulwa ne-antioxidant kwaye inceda ukuphelisa ukuvuvukala kwesikhumba kwaye iyanceda ukukhupha iiseli zolusu ezifileyo. Hlanganisa nobusi kwaye wenze ukukhuhla kuyo ukuze ufumane iziphumo ezilungileyo.
5. Ikofu: Isikorubhu sekofu singakunika olona lusu luthambileyo. Hlanganisa umgubo wekofu kunye neoyile yomnquma kwaye uyisebenzise kuyo yonke imilenze yakho xa uhlamba. Oku kuyakwenza imilenze yakho ibe mhlophe kwaye, kwangaxeshanye, yenze nolusu lwakho lube mpuluswa.
6. Ityuwa yaselwandle: Ityuwa yaselwandle yinto esebenzayo kwizikhuhli ezininzi onokuzithenga ezivenkileni. Kuyinto esirhabaxa kwindalo kwaye yenzelwe ulusu olunzima ngenene ukujongana nalo. Hlanganisa nayo nayiphi na ioyile esisiseko kunye nejusi yelamuni ukuze ufumane esona sikhanyiso sibalaseleyo.
7. Iswekile: Iswekile encinci irhabaxa kancinci kunetyuwa lolwandle kwaye inokusetyenziswa ngabantu abaneentlobo zolusu ezibuthathaka. Yidibanise nobusi kwaye uyisebenzise kwimilenze yakho kodwa ulumke, unokufuna ukutya oku kukhuhla ngenxa yobumnandi bayo!
pomace olive oil vs eyongezelelweyo intombi ukupheka
Ungasifumana njani isikhumba esikhanyayo esingenasiphako
indlela yokuphucula ukubona kwendalo ngokwenza umthambo kunye nokutya
indlela yokwandisa ubungakanani besifuba ngokukhawuleza ekhaya
kutheni ungalali emantla
Ukufiphala kwenyanga 2018 eIndiya ngeenkwenkwezi